China Imwe nhanho yekupedzisira kukweva centrifugal mhando NFPA FM moto pombi fekitori uye vagadziri Tongke
Muenzaniso Nha: XBC-ES
End suction centrifugal pombi dzinowana zita radzo kubva munzira inotorwa nemvura kupinda mupombi. Kazhinji mvura inopinda kudivi rimwe remvura, uye pamapombi ekudhonza ekumhara ekumusoro, zvinoita kunge zvinopinda "kumagumo" kwepombi. Kusiyana neiyo Split casing mhando iyo yekukweva pombi uye mota kana injini zvese zvinowirirana, kubvisa kunetsekana nezve pombi kutenderera kana kutungamira mune yemuchina imba. Sezvo mvura iri kupinda mune rimwe divi remvura, iwe unorasikirwa nekwaniso rwekutakura kune ese mativi emhepo. Kutakura rutsigiro kunenge kuri kubva kumota pachayo, kana kubva kupombi remagetsi furemu. Izvi zvinodzivirira kushandiswa kwerudzi urwu rwepombi pane makuru ekuyerera kwemvura kunyorera.
Hunhu Simbiso Chengetedzo
End suction centrifugal pombi dzinowana zita radzo kubva munzira inotorwa nemvura kupinda mupombi. Kazhinji mvura inopinda kudivi rimwe remvura, uye pamapombi ekudhonza ekumhara ekupedzisira, zvinoita kunge zvinopinda "kumagumo" kwepombi. Kusiyana neiyo Split casing mhando iyo yekukweva pombi uye mota kana injini zvese zvinowirirana, kubvisa kunetsekana nezve pombi kutenderera kana kutungamira mune yemuchina imba. Sezvo mvura iri kupinda mune rimwe divi remvura, iwe unorasikirwa nekwaniso rwekutakura kune ese mativi emhepo. Kutakura rutsigiro kunenge kuri kubva kumota pachayo, kana kubva kupombi remagetsi furemu. Izvi zvinodzivirira kushandiswa kwerudzi urwu rwepombi pane makuru ekuyerera kwemvura kunyorera.
Kuroora kana kuroorwa danho Pombi Azvakanakira:
● Zvakananga zvakabatanidzwa, humbowo hwekudengenyeka uye ruzha rwakaderera.
● Saizvozvowo dhayamita yemukati uye yekubuda.
● Kutakura kweC & U, rinova iro zita rakakurumbira muChina.
● Kutenderera kuyerera kutonhodza kunoona kwemaziso chisimbiso hupenyu hwakareba.
● Nheyo diki inodiwa iyo ichachengetedza mari yekuvaka ne40-60%.
● Yakanaka kwazvo chisimbiso chisina kuvhurika
♦ Yakaumbika chimiro, yakanyanya kunyorera yezvivakwa zvazvino.
♦ Pump casing: iyo inonamirwa casing ine pombi yekubatanidza yakagadzirirwa uye kugadzirwa neakanyanya kukwirira ne draulic modhi mazuva ano, ine inlet uye nzira yekubuditsa yakafanana dhayamita. Flanges inoenderana neGG4216.5, uye yakagadzirirwa Rp1 / 4 kana Rp 3/8 yekumanikidza kuyedza plug.
Eller Impeller: yakavharwa impeller, hapana muganho kutenderera kunongedzera pasi pemvura tembiricha pazasi 80 ° C uye 120 ° C.
♦ Yakasarudzika dhizaini inesimba chisimbiso mhete inochengetedza zvakanaka chisimbiso uye akavimbika mashandiro.
● Kuzadza kugona kwemukati meimba
● Mechiniki-inomhanya bvunzo kugona nemutengi yakagadzirirwa midziyo kune ese NFPA zviyero
● Mhando dzakatwasuka dzemagetsi kusvika pa2,500 gpm
● Vertical mamodheru emagetsi kusvika ku5,000 gpm
● Mune-mutsara mamodheru emagetsi kusvika 1,500 gpm
● Kupedzisa mienzaniso yekukwevera emagetsi kusvika 1,500 gpm
● Zvidhori: injini yemagetsi kana injini yedhiziri
● Zvikamu zvekutanga uye zvakaiswa mukati.
Magetsi Mota Dhiraivha uye Diesel Injini Dhizaina pombi dzemoto dzinogona kupihwa kune chero mubatanidzwa wepombi, madhiraivha, zvinodzora uye zvishongedzo zvezvakanyorwa uye zvakabvumidzwa uye NON Yakanyorwa moto sevhisi mafomu. Yakaiswa zvikamu uye masisitimu epasi moto pombi yekumisikidza mutengo uye nekupa izvi.
Magetsi Mota Dhiraivha Imwe nhanho moto pombi
Dhiziri Injini Dhiraivha Chikamu chimwe chete pombi yemoto
Pashure: TWP akateedzana Nharembozha maviri anobata Dhiziri Injini Dhiraivha Vharuvhu Priming tsime inonwisa mvura pombi
Zvadaro: Yakaparadzanisa casing kaviri kubvisa mhando NFPA UL FM pombi yemoto
TKFLO Vertical Turbine Moto Pombi Rondedzero
Rudzi rwePombi End svutugadzike centrifugal mapombi ane akakodzera kukodzera kupa mvura kune moto kuchengetedza system muzvivakwa, zvirimwa uye mayadhi.
Kukwanisa Kusvikira 2500GPM (567m3 / hr)
Musoro Kusvika ku 340feet (104meters)
Dzvinyiriro Kusvikira ku 147 Psi (10 kg / cm2, 1014 KPa)
Imba Simba Kusvikira ku 350HP (260KW)
Vatyairi Magetsi emagetsi akakwenenzverwa uye injini dzedhiziri
Rudzi rwemvura Mvura
Kupisa Ambient mukati memiganhu yekugonesa michina mashandiro.
Zvinyorwa zvekuvaka Simbi yekukanda, Bronze yakagadzirirwa
chiyero chekupihwa: Injini dhiraivha moto pombi + control panel + Jockey pombi Magetsi mota dhiraivhu pombi + control panel + Jockey pombi
Chimwe chikumbiro cheyuniti ndapota discuses neTKFLO mainjiniya.